Golaha Qurbajoogta Puntland shaqo kuma laha maqaalka cayda ah ee ku soo baxay Jidbaale.com [Akhris …] – Radio Daljir
Golaha Qurbajoogta Puntland shaqo kuma laha maqaalka cayda ah ee ku soo baxay Jidbaale.com [Akhris …]
Golaha Qurbajoogta Puntland ‘Puntland Diaspora Forum’ wuxuu si kulul u cambaareynayaa maqaalka been abuurka ah ee ay daabacday mareegta Jidbaale.com, taariikhdu markey ahayd Agoosto 23, 2009, iyadoo la istacmaalayo magaca Golaha Qurbajoogta Puntland si bareer, been abuur ahna loogu aflagaadeynayo madaxda iyo ummadda dawlada Puntland.
Waxaan ku wargalinaynaa dadka reer Puntland in qoraalkaasi uu yahay mid been abuur ah oo aan marnaba kasoo bixin Guddoonka iyo xubnaha Golaha Qurbajoogta Puntland. Farriinta iyo afkaarka gurracan ee uu qoraalka sare ku xusani xambaarsan yahay ma aha kuwo ka tarjumaya siyaasada guud ee Golaha Qurbajoogta Puntland. Sidaa darteed, Golaha Qurbajoogta Puntland iyo xubnihiisuba iyaga oo aaminsan cadaaladda (fairness) kuna adeegaya fekerka istusaaleynta toosan (constructive dialogue) ayey si adag u cambaareynayaan ku-tiri-ku-teenta maqaalkaas ku qoran.
Guddoonka Goluhu waxaa kale oo uu xubnahiisa iyo dhammaan bulshada reer Puntland u caddaynayaa in magacyada ku saxiixan qoraalka ku soo baxay Jidbaale.com aanay xubin ka ahayn, wakiilna uga ahayn dalalkaasi Golaha Qurbajoogta Puntland.
Golaha Qurbajoogta Puntland waxa uu qadarin u hayaa madaxda dawladda Puntland, siyaasada ay ku hogaaminayaan Puntland, iyo isbedalka horumarineed ee ay hormuudka ka yihiin.
Ma aha wax ku cusub bini?aadmiga in wax-ma-garad magacyo aan jirin wata, kuna gabanaya magacyo iyo ururo aan sal laheyn ay baahiyaan qoraalo lagu jaahwareerinyo ummadda iyadoo la adeegsanaayo rugaha xorta ah ee internetka.
Waxaan uga digaynaa rugaha interneetka sida Jidbaale.com in ay iska hubiyaan daabacaadda qoraaladda been abuurka ah iyo cawaaqib xumida ka iman karta, taasi oo wax u dhimaysa sumcadda iyo aaminaadda ay ku qabi karaan dadka soo booqanaya rugahooda internetka.
Guddiga Isgaarsiinta & Xiriirka Bulshada,
Golaha Qurbajoogta Puntland,